Nọgide na-amụmụ ọnụ ọchị na otu ụbọchị ndụ ga-agwụ ike nke ịkpasu gị iwe. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ka anyị na-azọ ndụ, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na anyị ga-ezute oge ọma na oge ọjọọ. Ing na-ejide a ezi agwa na odikwa n’ihu bụ isi ihe ga - enyere anyị aka ịnagide ndụ. Ọ bụrụ n’ịche na ndụ gị nwere ọtụtụ nsogbu ma na ị nweghịkwa enyemaka, gakwuru akụkụ nke ndụ gị.
Nke a ga - enyere gị aka ịmụmụ ọnụ ọchị na mgbe ị nwere nchekwube a ga - aga - achọpụta na ị nwere ume iji gboo nsogbu gị. Ndụ ga-akwụsị inye gị nsogbu n'ihi na ugbu a siri ike ị weghara ihe ọ bụla na-abịara gị.
Nsogbu ndị ahụ agaghị enwe nsogbu. Mana iru ebe a adịghị mfe. Mmadu gha aghagh i inabata ihe ndi mmadu na enweghi obi mgbawa. Ma oburu n’’ilegide na nchekwube gi mgbe ahu, gi onwe gi ga achota n’ime gi iguzogide nsogbu gi.
Mara na ma n’oge ihe ọma ma n’oge ọjọọ ga-abịa n’usoro. N'oge ọma, nwee ekele ma jiri oge niile. N'oge ihe ojoo, jisie ike. Were enyemaka mgbe achọrọ gị ma mụta nkuzi ka ị sie ike. N'ime oge a niile, mee ka nchekwube dị elu ma marakwa na ị nwere ya n'ime gị ka ị wee gbanahụ oge ọjọọ.
Omume a ga - enyere gị aka ma mee ka ndụ gị nwee isi. Will ga-enwekwa ike nyere ndi ozo aka mgbe ha no na nkpagbu n'ihi na ị ga - enwe ike ịkọ site n'ahụmahụ gị. N'ụzọ dị otu a, anyị niile nwere ike ịchọta ụzọ anyị na ibe anyị ga-esi mee ka ndụ anyị bakwuo ụba.
Nọgidenụ na-ekwu okwu na-amụmụ ọnụ ọchị
Nọgidenụ na-amụmụ ọnụ ọchị
Otu banyere obi uto na ịchị ọchị
Ọnụ ọchị na-eche ọchị
Quates na-achị ọchị
Achọghị m ndụ zuru oke. Achọrọ m inwe obi ụtọ, n'etiti ezigbo ndị enyi hụrụ m n'anya maka onye m bụ. - Amaghi ama
Achọghị m ndụ zuru oke. Achọrọ m ị toụrị ọ byụ, site na ezigbo ndị enyi hụrụ m n'anya…
Ufodu ghari ime ka gi buru onye ojoo ka obi ojoo ghara ime gi ihe ha mere gi. - Amaghi ama
Peoplefọdụ ndị mmadụ ga-eme ka à ga-asị na ị bụ ajọ mmadụ ka ha ghara inwe obi amamikpe maka ihe ha…
Igosipụta kachasị nke ike na akparamagwa na ndụ gị bụ oge ị ga - enyere onye ọzọ aka mgbe ị na - agabiga agabiga. - Amaghi ama
Ndụ anaghị adịkarị mgbe niile. Will ga-eche ọtụtụ nsogbu ihu n'ihu. Agbanyeghị, a…